Inkonzo - Funlandia
Singcono kakhulu kulokho esikwenzayo, futhi leyo yinkonzo.
IFunlandia inolwazi nesipiliyoni seminyaka ekusizeni amaklayenti ahlele futhi aklame amaphrojekthi awo ngendlela engenzeka kakhulu. Lokhu kufaka phakathi ukuhlaziywa kwezici ezahlukahlukene ezinjengezimakethe, ukukhethwa kwesayithi, amaqembu ebhizinisi nabasebenzisi.
Sikukhethela amaphrojekthi wepaki wokuzijabulisa afaneleka kakhulu nezinsiza kusebenza zakho, bese sikuhlelela konke ukuhlelwa kwesikhala okunamandla nemishini yokuma.
IFunlandia ibeka ulwazi lomsebenzisi ngaphambili futhi ixhumana kakhulu namakhasimende ukuklama imiqondo ekhangayo. Sibheka imininingwane ngokuphelele ngenhloso yokuhlela umqondo wenzuzo yesikhathi eside yamakhasimende ethu.
Imidwebo enemininingwane ikhiqizelwa umkhiqizo ngamunye ukuqinisekisa ukubekeka okunembile esikhaleni nasekuhlanganisweni okuphelele phakathi kwemikhiqizo naphakathi kwemikhiqizo nendawo ukuthola umphumela ohambisana ngokuphelele nemidwebo yokuklama.
Sakha ama-esthetics abonakalayo ngokusebenzisa ukwakheka kwezithombe okususelwa kuzinto ezahlukahlukene ezinemixholo, imibala, njll.
Sibamba ukuthambekela kwempahla yezebhizinisi, sisebenzise imiqondo emisha futhi eseqophelweni eliphezulu, bese siphishekela ukuvumelanisa phakathi kokuklama inkundla yokudlala nokwakhiwa kwendawo ukudala indawo yokuzijabulisa ecwilizayo.
Abaphathi bethu bamaphrojekthi baqinisekisa ukuthi imibono yokuklanywa iyalandelwa futhi iyalandelwa ngesikhathi sokukhiqiza, ukukhiqiza kanye nokufakwa. Banaka okuqukethwe nokulawulwa kwekhwalithi kuzo zonke izici kusuka emininingwaneni kuya emiqondweni yonke.
Copyright 2010-2021 funlandia.com Wonke Amalungelo Agodliwe. Hot ProductsIbalazweDlala Izinsiza Zezingane, Izinsiza kusebenza ze-Adventure Indoor Playground, Izingane Zabakhiqizi Bendawo Yokudlala, Izindleko Zasendlini Yokudlala Yangaphakathi, Ukwenziwa kweTrampoline Park, IBig Air Trampoline Park Franchise,